လင်္ကာ: ရင်ထဲကရှစ်ဆယ့်ရှစ် အပိုင်း ( ၃ )
၁၉၈၈သြဂုတ်လ(၈)ရက်နေ့မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့..ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံဆိုတာ… တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကနေ.. ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအကောင်ထည်ဖော်ဘို့..တောင်းဆိုခဲ့ ကြတဲ့..လူထုတော်လှန်ရေးကြီးဖြစ်တယ်..မင်းမဲ့စရိုက်တွေနဲ့ပရမ်းပတာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့..ဆူပူအရေးအခင်းမဟုတ်
ခေါင်းလောင်းသံမဆုံးခင်မှာပဲကျနော်တို့သုံးယောက်သားကျောင်းထဲကိုအပြေးဝင်သွားတယ်၊ လုံခြုံရေးဆရာတယောက်ကတံခါးပိတ်မလို့ထအလာ…ဆရာကကျနော်တို့ကိုကြည့့် ပြီးကြောင်သွားတယ်…..ကျန်တဲ့ဆရာနှစ် ယောက်ကထလာပြီး ကျနော်တို့ကိုလိုက်တားတယ်……
“ဟာ…..ဟာ…ဘာလုပ်ကြမလို့လည်းခလေးတို့…ဘာလုပ်ကြမလို့လည်း….”ဆရာ့အော်သံကိုကျနော် တို့နားစွင့်မနေနိုင်ဘူး…ကျနော်တို့သုံးယောက်လုံးကျောင်းအပေါ်ထပ်ပြေးတက်သွားခဲ့တယ်…ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီးရုံး ခန်းနားရောက်တော့…ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ရုံးစာရေးတယောက်ကမတ်တပ်ရပ်လို့်…ရုတ်တရက် ဆိုတော့ သူတို့ လည်း ကြောင်သွားပုံရတယ်…ကျနော်က“တယ်လီဖုန်း ဘယ် မှာ လည်းဗျ” ဆိုတော့… ရုံးစာရေးလုပ်တဲ့သူကလက်ညှိုးလှမ်းထိုးပြလိုက် တယ်… ကျနော်အ ပြေးအလွှားသွားပြီး ပါလာတဲ့ ဓါးမြှောင်နဲ့ ဖုန်းကြိုးကို ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်…..…မြို့နယ်ပညာရေးမူးရုံးကလည်း ကျောင်းအပေါ်ထပ်မှာ… ကျနော်ပညာရေးမှုးရုံးခန်းဆီကိုတခါအပြေးဝင်သွားတယ်…ကျနော်ဝင်သွားတော့.. ရုံးခန်းက၀န် ထမ်းတွေက…မတ်တပ်လေးတွေရပ်ပြီး..ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး..သူတို့စိတ်ထဲ..ဘာတွေဖြစ်နေတာလည်းကို မသိတာ….စောစောကလိုပဲ ဖုန်းကိုလိုက်ရှာပြီး ကြိုးကိုဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်…အဲဒီအချိန် မှာ..သက်နိုင် နဲ့ ကျော်ဆန်းဦးက ကျောင်းဆောင်အပေါ်ထပ် ဆရာ၊ဆရာမများနားနေရာအခန်းမှာ..တရားတွေဟောလို့…
ကျော်ဆန်းဦးကလက်သီးလက်မောင်း တန်းပြီးတရားဟောနေတော့…ဆရာဆရာမတွေလည်းဘာမှပြန် မပြောကြဘူး..ငုတ်တုတ်လေးတွေထိုင်ပြီး.. ကျနော်တို့ကိုကြောင်စီစီလေးတွေကြည့်နေကြ တယ်….ကျနော်က ကျောင်းအောက်ကိုတချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကျောင်းရှေ့ကွင်းပြင်လယ်မှာ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်က ကိုကံတင်နဲ့ ကျော်စွာတို့အုပ်စုက ခွပ်ဒေါင်းအလံကိုလွင့်ပြီးကြွေးကြော်သံတွေတိုင်လို့…
ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားအင်အားကဘာမှမရှိဘူး…ကွင်းပြင်လည်မှာအယောက်နှစ်ဆယ်လောက်ငုတ်စု စုလေးအော်နေ ကြ တာ…ကျနော်တော်တော်အားငယ်သွားတယ်…ဒါနဲ့ကျနော်တို့ကျောင်းအောင်ထပ်ကိုပြန် ဆင်း လာကြပြီး….စာသင်ခန်းထဲကိုဝင်တယ်….ကျောင်းသားတွေကိုဝင်ပြီးတရားဟောတယ်…တခြားအဆောင်တွေ မှာလည်း…ကျနော်တို့ရဲဘော်တွေက..စာသင်ခန်းတွေထဲဝင်..ကျောင်းသားတွေကိုကွင်းလည် ထွက်ခဲ့ဘို့ပြောတယ်…ဒါပေမဲ့ ကျောင်းသားတွေကကြောက်နေကြပြီးဘယ်သူမှထွက်မလာ ဘူး… .ကျောင်းရှေ့ ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့… ကျော်လင်းတို့အုပ်စုကတံခါးမကြီးကိုသူတို့ယူလာတဲ့ သံကြိုးတွေ နဲ့ ချည်ပြီးပိတ်ထားလိုက်တယ်…တံခါးမကြီးရဲ့တဘက်ကျောင်းဝန်းအပြင်ဘက်မတော့…အစုလိုက် အပြုံလိုက်လူထုကြီး….နောက်မှသိရတာက…ကျနော်တို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကိုက်နာရီကိုရောက်တာနဲ့ တပြိုင်နက်ထဲ…မြို့ထဲမှာတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေက… သတင်းစကားတွေကိုလိုက်ဖြန့်ကြတယ်…ဖြစ် ချင်တော့… ကျနော်တို့ထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ မြင့်ငွေ ( ယခု NDF ပါတီဗဟိုအလုပ်အမူ့ဆောင်အဖွဲ့ဝင်)က လမ်းတလျှောက်အော်ပြေးတယ်လေ…
“ အထက ( ၁ ) မှာ သူပုန်တွေဝင်စီးလို့ဗျို့……..အထက ( ၁ ) မှာ သူပုန်တွေဝင်စီးနေပြီ ” ဆိုတော့…မြို့နေလူထုကထိတ်လန့်သွားပြီး..သူတို့သားသမီးတွေရှိရာကျောင်းဆီကိုတဟုန်ထိုးရောက် လာကြ တယ်…ကျောင်းဝန်းပြင်ပမှာသာလူထုကြီးကရောက်နေတာ…ကျောင်းဝန်းအတွင်းမှာကဘာမှမရှိ သလောက်နီး ပါး…ကျနော်တို့စိတ်ဓါတ်တော်တော်ကျသွားကြတယ်…ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိတော့ ဘူး…ပြာယာခတ်နေ ကြပြီ…သက်နိုင်ကကျနော့်ကိုကြည့်ပြီး..မျက်နှာအမူအရာနဲ့…ဘာဆက်လုပ်ကြမ လည်းပေါ့……ကျနော့်ခေါင်းထဲအကြံတခုဝင်လာတယ်…ဘာမှပြောမနေတော့ဘူး…ကျောင်းအပေါ်ထပ် ကိုပြေးတက်သွားပြီး..ခေါင်းလောင်းရှိ ရာကိုသွားတယ်…ပြီးတော့..ခေါင်းလောင်းကိုအဆက်မပြတ် တီးတော့…..ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကကြောင်ပြီး ကြည့်နေတယ်….စာသင်ခန်းတွေဆီကကျောင်း သားတွေ က..တကယ်ကျောင်းဆင်းတယ်ထင်ပြီးအကုန်ထွက်လာကြတယ်…အဲဒီအခါကြမှကျောင်း သားတွေ က ကွင်းလယ်ကိုစုရုံးရောက်ရှိလာပြီး..ကျနော်တို့လူတွေနဲ့ပေါင်း စည်းမိသွားတော့ တယ်… ခွပ်ဒေါင်း အလံတော်ကိုရှေ့ကငွားငွားစွင့်စွင့်ကိုင်သူကကိုင်နဲ့စနစ်တကျတန်းဆီထွက်ဘို့လိုက်ပြော အပြီး မှတော့ငါးရောက်တွဲတန်းဆီပြီးကျောင်းထဲကနေထွက်လာတော့တယ်….ကျောင်းဝန်းအပြင် ကစောင့်ကြည့်နေကြ တဲ့လူထုကြီးကအဲဒီအခါကြမှသဘောပေါက်တယ်ထင်ပါရဲ့..လက်ခုပ်သံတွေ.. မိုးထိ ယံနေ အောင်တီးလို့အားပေးကြရင်းသူတို့ပါစီတန်းဆန္ဒပြတဲ့ထဲမှာပါလာကြတယ်လေ။…..ဘေးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ကကျနော့်ကိုလက်ကိုင်ပုဝါတထည်လှမ်းကမ်း တယ်….သူ ကိုယ်တိုင် လည်းမျက်နှာမှာစည်းထားတော့…စိတ်ထဲမှာ..သူ့များဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့ဘယ်သူကများပြောထား ပါလိမ့်ပေါ့…ဒီလိုနဲ့နေရာတနေရာအရောက်မှာ ပထမဆုံးလူထုနိုင်ငံရေးတရားပွဲစကျင်းပတယ်…လူတွေ ကစား ပွဲခုံတလုံးထုတ်ပေးတော့..ကျနော်ကအဲဒီအပေါ်တက်..ဦးထုတ်အမဲတလုံးကိုလည်းခေါင်း မှာဆောင်း… လက်ကိုင်ပုဝါကိုလည်း..မျက်နှာမှာစည်းထားရင်း (ရုပ်ဖျက်တာ)နိုင်ငံရေးတရားတွေကို အားနဲ့မာန်နဲ့ဟောတာပေါ့
“ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျား…..ကျနော်တို့ဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေပါ…အခုဒီနေ့ကစလို့ ကျနော် တတွေဦးဆောင်မှု နဲ့…တပါတီအာဏာရှင်မဆလအစိုးရ(မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရ)ကိုလူထု အုံကြွမူ့နဲ့တော်လှန်လိုက်ပါပြီ……..”
“ကျနော်ပြောချင်တာဒီလောက်ပါပဲ…ကျနော်တို့လူထုကြီးဆက်လက်ပြီးစီတန်းလှည့်လည်ရင်း ဆန္ဒတွေ ကိုထုတ်ဖော်ကြမယ်..ကျနော်တို့နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ကြပါ..”
“လိုက်မယ်….လိုက်မယ်….ဖြောင်း…ဖြောင်း…ဖြောင်း…..ဟေ့ဒါမှ…တို့ရွာသစ်သား…မောင်မောင်ဝမ်းကွ. .ရွာ သစ်သားကွ….”
ဟာသွားပြီ..ကျနော်တော်တော်ရီချင်သွားတယ်…ရွာသစ်ဆိုတာကျနော်နေတဲ့ရပ်ကွက်. ကျနော်ကမ သိအောင် ရုတ်ဖျက်ထားကာမှ..ကျနော့်နံမည်ကိုထုတ်အော်နေကြတော့..မထူးတော့ပါဘူး..မျက်နှာမှာစည်း ထားတဲ့လက်ကိုင်ပုဝါရောဦးထုတ်ရောဆွဲချွှတ်ပစ်လိုက်တယ်…..လူအုပ်ကြီးကများသထက် များလာပြီ…. .ကျောင်းသားတ ယောက်ကကြွေးကြော်သံရှေ့ကတိုင် ပေးတယ်……
လမ်းဘေးတလျှောက်မှာလည်းအားပေးနေကြတဲ့လူထုပရိတ်သပ်ကြီးကအားရစရာ….ရေတိုက်သူကတိုက်..မုန့်တွေပေးသူကပေး….လက်ခုပ်တီးသူကတီး….ဒီလိုနဲ့မြို့ထဲတနေ ရာရောက်တော့…. .
“ကုလားဗလီမီးရှို့ကြမယ်ဟေ့…ကုလားတွေလိုက်ရိုက်…ကုလားဆိုင်တွေဖျက်ကြ….”ဆိုတဲ့အသံတွေက စူးထွက်လာတယ် လူတွေအားလုံး စနစ်တကျ စီတန်းလှည့်လည်လာရာက ၀ရုန်းသုံးကားတွေဖြစ် ကုန်ကြတယ်…ဒါနဲ့ ကျနော်ကကျောင်းသားတွေအားလုံးကိုအပြေးအလွှားလိုက်ခေါ်ပြီး မွတ်စလင် ဗလီ သွား ရာ လမ်းသွယ်ထိပ်ကနေ တယောက်ကိုတယောက်လက်ခြင်းယှက်ပိတ်ထား လိုက်တယ်….စားပွဲခုံတလုံးကိုအမြန်ယူခိုင်းပြီး ခုံပေါ်တက်စကားပြောရပြန်တော့တယ်…….
လက်ခုပ်တွေကိုတဖြောင်းဖြောင်းတီးရင်းဆက်ချီတက်ခဲ့ကြတယ်……မြို့မြောက်ဖျားဘက်ရောက် သည့် တိုင် အောင်လူထုဆန္ဒပြပွဲကြီးကိုကျင်းပခဲ့ကြတယ်..တခါမြို့ထဲဘက်ကိုပြန်လှည့် လာခဲ့ တယ်… .ကျနော် တို့အားလုံးကသပိတ်စခမ်းအမာခံထိုင်မဲ့နေရာကိုလျှို့ဝှက်ထားတယ်…တကယ်လို့ဒီလိုမလုပ်ပဲကြိုတင်ကြေငြာ လိုက်မယ်ဆို..အာဏာပိုင်တွေက လက်နှက်ကိုင်တွေနဲ့စီးစောင့်နေမှာကိုကာကွယ် ထားတဲ့ သဘောပါ….
သပိတ်စခမ်းအမာခံထိုင်မဲ့နေရာကမြို့လည်နားမှာရှိတဲ့..လည်ပေါ်(လယ်ပေါ်)သာသနာ့ဗိမ္ဗာန်…ဒီနေရာက သမိုင်းရှိခဲ့တဲ့နေရာ….တို့ဗမာအစည်းရုံးကြီးပြည်လုံးကျွှတ်ညီလာခံကျင်းပခဲ့တဲ့နေရာ….ဗိမ္ဗာန်ကြီးက လည်း တော်တော်ကြီးတယ်….ဘေးပတ်လည်ကလည်းရပ်ကွက်တွေအိမ်တွေဝန်းရံထားတော့…လက်နှက် ကိုင်တွေ တော်ယုံဝင်ဘို့မလွယ်ဘူး
လည်ပေါ်သာသနာ့ဗိမ္ဗာန်ကိုဝင်မဲ့လမ်းသွယ်ထိပ်ကိုဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲကျောင်းသားတွေ အားလုံးကလမ်းကြောင်းပေးလိုက်ကြတယ်…အဲဒီ့နေရာမှာအမာခံသပိတ်စခမ်းထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်း ကိုလည်းအားလုံးသိအောင်ဖြန့်ဝေလိုက်တယ်……သာသနာ့ဗိမ္ဗာန်ထဲကိုလူထုကြီးရောက်တော့ …တော်တော် မောနေကြပြီ…မြို့တပတ်ဆိုတာနည်းတဲ့အကွာဝေးမှမဟုတ်တာ…ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေ ကသောက်ဖို့..ရေတွေကိုပလပ်စတစ်ပုံးတွေ..ရေအိုးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်သယ်လာရင်း…လာတိုက်ကြတယ် …ခနနေတော့လူထုထဲကပဲသူတို့ဖာသာသူတို့မိုက်ကရိုဖုန်းတွေလော်စပီကာတွေသယ်လာကြ တယ်… .မမော နိုင်မပမ်းနိုင်အသံချဲ့ စက်တွေဆင်..နေရာတွေချပေါ့…..လူစုမခွဲဘို့ကျောင်းသားတွေကမေတ္တာရပ်ခံ ထားတော့…လူအုပ်ကြီးကကွဲမ သွားဘူး…ဒီလိုနဲ့...နေ့လည်(၁)နာရီလောက်ကနေ..သာသနာ့ဗိမ္ဗာန်ထဲမှာ..အထိုင်သပိတ်စခမ်း…နိုင်ငံရေး တရားပွဲကိုကျင်းပကြတော့…တယောက်ပြီးတယောက်စင်ပေါ် တက်ပြောတော့ တာပဲ….လူထုရဲ့ရင်ဖွင့်သံအသီးသီးကိုကြားနေရပြီ…
“ကျမမှာသားသမီး၅ယောက်ရှိပါတယ်…ယောကျာင်္းဆုံးသွားတာ…၁၂နှစ်လောက်ရှိပါပြီ..ကျမကအကြော်ရောင်း ပြီးသားသမီးတွေကိုစောင့်ရှောက်လာခဲ့တာ..ကျမမှာဝင်ငွေနဲ့… ထွက်ငွေ မလောက်ပါဘူးရှင်…မနှစ်က သမီးအငယ်ဆုံးလေးဖျားလို့ဆေးရုံသွားပို့တာ…ကျမတို့မှာ..ဆေးကုစရာပိုက် ဆံက လည်းမရှိ..ဘယ်သူကိုအားကိုးရမှန်းလည်းမသိ….သောကတွေဝေခဲ့ရပါတယ်… ဒါပေမဲ့..ကျမသ မီးလေး အသက်မရှင်ရှာပါဘူး….
“အလုပ်လုပ်တိုင်းသာချမ်းသာရစတမ်းဆို…ကျုပ်ချမ်းသာတာကြာပြီဗျ….ကျုပ်ကဆိုက်ကားနင်းတယ်….အားတဲ့အချိန်ဝါသနာပါတဲ့…စာလေးပေလေးဖတ်တယ်…..ကျုပ်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ချိန် ဟာ တနေ့ကို၁၀နာရီလောက်ရှိတယ်….တနေ့တနေ့စားဘို့ကိုမနည်းရုန်းကန်နေရ တယ်…ဒါတောင် မတ်တပ်စာပဲရှိသေးတယ်နော် …တုန်းလုံးစာ… (နေထိုင်မကောင်းလို့ဆေးကုသရမဲ့စရိတ်)တပြားမှမရှိဘူး…နေမကောင်းလို့ဆေးရုံသွားမယ်…ဘယ်မှာလည်း ဆေး…အလုပ်မလုပ်နိုင်လို့..စားစရာမရှိရင်..ဘယ်သူကလာကြွေးမှာလည်း…ဒီစနစ်ဆိုးကြီးကိုကျုပ်မကြိုက်ဘူးဗျာ…အားလုံးတော် လှန် ပစ်ကြမယ်….
ဒီလိုနဲ့ညနေနည်းနည်းစောင်းသွားတော့….စီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြပွဲကိုဆက်လို့ဖို့..ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…ကျနော်ကတချို့လူတွေကိုမေတ္တာရပ်ခံပြီးသပိတ်စခမ်းမှာစောင့်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်…ဘာလို့လည်းဆိုတော့… လူတွေအားလုံးထွက်ခွာသွားတဲ့အခါ….အာဏာပိုင်တွေက…သပိတ်စခမ်းကိုဝင်သိမ်းသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ရ သေးတယ်….ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေခေါင်းဆောင်ပြီး…လူထုဆန္ဒပြပွဲကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ တယ်။ ညနေ၆နာရီလောက်လည်းရောက်ရော…သတင်းဆိုးတခုက၀င်လာတယ်…ဆန္ဒပြပွဲကိုအာဏာပိုင်တွေ ကဖြိုခွင်းနေ ပြီ….အခုဆန္ဒပြသမားတွေ..ပိတ်မိနေပြီ…သေနပ်နဲ့လည်းပစ်တာ…တယောက်သေသွားတယ် လို့ကြားတယ်….ကျနော်တော်တော်စိုးရိမ်သွားတယ်…စိတ်တွေလည်းအရမ်းလှုတ်ရှားနေပြီ…မတတ်နိုင် ဘူး…ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဦးဆောင်ပြီးနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့တယ်…မြို့ထဲတလျှောက်မှာလည်း..လူထုကိုလှုံ့ဆော်ရင်း…ပိတ်မိနေတဲ့နေရာဆီချီတက်လာတော့…တနေရာအရောက်မှာ…လူတွေက၀ိုင်းတား တယ်…ရှေ့ဆက်မသွားနဲ့ပစ်လိမ့်မယ်…အကြောင်းမဲ့အသေမခံကြပါနဲ့…သပိတ်စခမ်းမကျအောင်သာကာ ကွယ်ကြအောင်ပါ…ဆိုတော့ ကျနော်တို့နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လာခဲ့ကြတယ်…ရွှေဘုံသာရပ်ကွက်နေ..ဖိုးချိုဆိုတဲ့သူသေနပ်နဲ့အပစ်ခံရတာ ပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်…သုံးဦးလောက်ဒဏ် ရာရတယ်… လူထုကြီး က..အာဏာပိုင်တွေစီးလာတဲ့ကားကို အတင်းလုယူပြီးမီးရှို့ပစ်လိုက်ကြတယ်…လူအုပ်ကြီးက ယူကြုံးမ ရဖြစ်နေပြီ်…ဒေါသတွေပေါက်ကွဲနေပြီ…ဒါပေမဲ့အမာခံသပိတ်စခမ်းကိုတော့မကျရအောင်ပြန်လှည့်ကာ ကွယ်ဘို့ပြန် လာရာကနေ..ရဲစခမ်းတခုရှေ့လည်းရောက်ရော…လူအုပ်ကြီးကရဲစခမ်းဝန်းထဲက..အဆောက် တဦတခုကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်လေ…လူအုပ်ကြီးကိုကျနော်တို့မထိန်းနိုင်တော့ဘူး…..ဘာတတ်နိုင်မှာ လည်း… ကျနော်တို့ဘယ်လိုမှမတားဆီးနိုင်တော့ဘူး….
ညဘက်၈နာရီသတင်းမှာတော့…ဆူပူအကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြသူလူတစုကကားကိုမီးနဲ့ရှို့လို့သေနတ် နဲ့ပြန် လည်ပစ်ခတ်တာလူတဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတာပါလာတယ်…ကျနော်တို့တတွေဒေါသထွက်လိုက် တာမပြောပါနဲ့..တကယ်က..သေနတ်နဲ့ပစ်တာ..လူတဦးသေလို့…လူထုကကားကိုမီးနဲ့ရှို့လိုက်တာ …ပြောင်းပြန်ကြေငြာသွားတယ်…အစိုးရရဲ့မသမာမှု့နဲ့လိမ်ညာမှု့ကိုအားလုံးကသဘောပေါက်သွားကြပြီ…..အဲဒီနေ့ကလူတွေတော်တော် များများဒေါသတွေထွက်ကြတယ်…ကြေကွဲကြတယ်…ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သပိတ်စခမ်းကိုအာဏာပိုင်တွေဝင်မစီးနင်း နိုင်အောင်တော့ကာကွယ်ရမယ်….သပိတ်စခမ်းတည်ရှိရာ..ဆုံတိုက်ရပ်ကွက် သူရပ်ကွက်သားတွေအပါဝင် လူတွေက နိုးနိုးကြားကြားနဲ့ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ကြတယ်လေ…